I-DA-7 A3-Ukumiselwa komgangatho eyi-1.Constant Height Head Ends: Upheleliso lwentloko oluphezulu olugqibeleleyo lwenza ukufikelela ngokukhawuleza kunye nokulula kwentloko yesigulana, intamo kunye ne-thorax. 2.Split Side Rails: Iindlela ze-4pcs PP ecaleni kwendlela zinika isigulana ukhuseleko ekuweni. 3.Iplatform yeMatress eVuswayo: Iqonga leMathumbu liziibhodi ze-phenin ze-resin ezinokuthi zikhuphe kalula kwaye zilula ukubulala iintsholongwane. Iqonga le-mattress linokwenza i-X-ray yebhodi yangasemva kwaye inike isigulana ukuba sikhululeke ngakumbi. 4.Central Nurs Management S ...
Ukuhlaziywa kweentloko ze-DA-7 A2-1.Ukuphela kwentloko yokuphakama okuphezulu: Ukugqitywa kwentloko engapheliyo kwenza ukufikelela ngokukhawuleza kwentloko yesigulana, intamo kunye ne-thorax. 2.Split Side Rail: Iindlela ze-4pcs PP zendlela ende inika isigulana ukhuselo ekuweni nokuwela ii-pcs ezimbini ezilandela ecaleni kwebhodi yenyawo zinikezela ngenkonzo yezokhuseleko ngakumbi nokubonelela ngenkxaso ngexesha lokuma kwesigulana. Inkqubo ye-ScalesIntegrated: Iphaneli yokulawula isikali sebhedi ebekwe phantsi komphantsi wenyawo ikhuselekile kwiimpembelelo ...
I-DA-7 A1-Ukumiselwa komgangatho oQhelekileyo 1.Split Side Rails: The 4pcs PP Rails kwicala libonelela isigulana ngokukhuseleka kokuwa kunye ne-2 pcs eyongezelelweyo kwicala elisecaleni kwebhodi yenyawo inikezela ngenkonzo yezokhuseleko ngakumbi kwaye inika inkxaso ngexesha lokuma kwesigulana. Inkqubo ye-ScalesIntegrated: Iphaneli yokulawula isikali sebhedi ebekwe phantsi komphantsi wenyawo ikhuselekile kwiimpembelelo. Iqonga leMatrous elikwazi ukukhutshwa: Iqonga leMathumbu ziibhodi zepulasitiki ezinokuthi zisuswe ngokulula kwaye zilungelelaniswe nokubulala iintsholongwane ...
I-DA-2 A2-Ukumiselwa komgangatho oqhelekileyo 1.Split Side Rails: The 4pcs PP Rails sideways zibonelela isigulana ngokukhuseleka ekuweni. Iplatifomu ehlaziyiweyo ye-Matress: Ukususa ngokulula kwaye kulula ukwenza ukuba ube nokubulala iintsholongwane. Iqonga le-mattress linokwenza i-X-ray yebhodi yangasemva kwaye inike isigulana ukuba sikhululeke ngakumbi. Izitshixo zeBhodi yeeBhedi zeHH / F: Ukutshixwa kweebhedi zeebhedi kukhusela ukukhutshwa ngokungafanelekanga kweebhodi zeebhedi xa uqhuba okanye uphatha ibhedi. Iziqwengana zekona ezisebenzayo 5.Ukuphakamisa isibonda okanye imingxunya yokuma imingxunya 6.Izixhobo zokubamba ...
I-DA-2 A1 -Umgangatho woqwalaselo 1.Split Side Rails: Iindlela ze-4pcs ze-HDPE ezisecaleni zinika isigulana ukhuselo ekuweni. Iplatifomu ehlaziyiweyo ye-Matress: Ukususa ngokulula kwaye kulula ukwenza ukuba ube nokubulala iintsholongwane. Iqonga le-mattress linokwenza i-X-ray yebhodi yangasemva kwaye inike isigulana ukuba sikhululeke ngakumbi. Izitshixo zeBhodi yeeBhedi zeHH / F: Ukutshixwa kweebhedi zeebhedi kukhusela ukukhutshwa ngokungafanelekanga kweebhodi zeebhedi xa uqhuba okanye uphatha ibhedi. Iziqhoboshi zekona ezisebenzayo 5.Ukuphakamisa isibonda okanye ukumiliselwa kwemingxunya yokuma 6.Matress Holder ...